के Bitcoin र 'बिग डेटा' नयाँ सुन वा नयाँ तेल हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
के Bitcoin र 'बिग डेटा' नयाँ सुन वा नयाँ तेल हो?
मा दायर Bitcoin, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	27 नोभेम्बर 2017 मा	• 8 टिप्पणिहरु
यसको पहिलो वर्षमा, बिटकोइजले प्रायः व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी उनीहरूको औषधिलाई गुमनाम रूपमा पठाउँथे र घरबाट मेल पठाउँथे। ती व्यक्ति जसले7वर्ष पहिले सुरु गरे र बिर्सिएका छन् अहिले 10 यूरोको बिटसेन्टहरू अब पहिलो बिटककोइन मिलियनहरू छन्। यदि तपाईले 2010 मा तपाईंको खातामा बिटकोन्सहरूमा केवल 10 यूरो हुनुभयो भने, तपाई अब 1,6 लाख यूरो धनी हुने हुनुहुन्थ्यो। Bitcoin को मान 16.255.800% बढ्यो। यदि तपाईले एक वर्ष पहिले bitcoins को लागि थोडा 1000 खरिद गर्नुभएको थियो भने, तपाईं अब एक € 9.000 अमीर प्राप्त गर्दै थिए, किनकी एक वर्ष मा पनि बिटकोइन 1000% भन्दा अधिक बढेको छ। अन्तिम6महिनाहरूमा 275% को वृद्धि भएको थियो र पछिल्लो हप्ता पनि बिटकोइनले लगभग 20% को जम्प बनाएको छ! त्यस बिटकुइनसँग के कुरा छ? यसले यस डिजिटल मुद्राको मूल्यलाई कति विशेष बनाउँछ?
त्यहाँ धेरै विश्लेषकहरू छन् जसले अर्को बबल बिचको सिक्किङ्ग मूल्य वृद्धि बढाउँछन्; एक बुलबुले जुन हरेक क्षणमा फोटो खिच्न सक्छ। धेरै अनुभवी निवेशकहरूले तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ कि बिटकुइन भेडासँगसँगै जानु हुँदैन र सुनमा पैसा कमाउँदैन। तर प्रो बिटकोइन ध्वनिहरू केवल प्रशंसकको रूपमा हुन्। आज बिटकोइन पहिले नै दिशामा जान्छ 10.000 डलर सीमा; 8000 सीमा पहिले नै यूरोमा पार भएको छ।
बिस्कुट के हो?
वास्तवमा, बिटकोइनको मूल्य यसको आविष्कारक (हरू) द्वारा निर्धारित हुन्छ। को अनुसार आधिकारिक पढाइ त्यो आफूलाई अज्ञात व्यक्ति हो सातोशी नामाटोटो कलहरू। उहाँले 2009 मा bitcoin को सिद्धान्त लागू गर्नुभयो। तपाईं तर्क गर्न सक्छ कि बिटकोइन नयाँ विश्व अर्डरको आदर्श मुद्रा हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि वास्तवमा सत्यसा छ। त्यसोभए प्रश्न हो: वास्तवमा बिटकोइन के हो, तपाईं यसको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ र मूल्य निर्धारण गर्दछ?
बिटकोइज डिजिटल रूपमा सिर्जना गरिएको मुद्रा हो, जसको मात्रा उपलब्ध छ, यसको निर्माता (हरू) द्वारा निर्धारण गरिएको। यो बिटकोन्सको मात्रा डिजिटल एन्क्रिप्शन चालको प्रकारले निर्धारण गर्दछ। यो, जस्तै थियो, एक मुद्रा जो इन्टरनेट मा अदृश्य रूपमा फ्लोट गर्दछ। तपाई यसलाई डिजिटल खनिजको तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। लेखकले एक एन्क्रिप्शन बनाएको छ जुन यति जटिल छ कि यो तोक्न गाह्रो छ। बिटकोन्सहरू इन्टरनेटमा कहीं एन्क्रिप्टेड प्याकेजहरूमा कहीं फ्लोट गर्दछ। तिनीहरू, जस्तै यो संसारमा कहीं पनि एक भाइरसको रूपमा घेरिएको हुन सक्छ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि बिटककोइको आविष्कारकले एक किसिमको नयाँ कीमती धातु बनाएको छ जुन धेरै अनूठा छ कि कुनै पनि यसलाई गर्न सक्दैन। त्यसपछि तिनीहरूले यसलाई सबै प्रकारका पहाड शाफ्ट र संसारभरि गुफामा लुकाए। यो अब यो नयाँ कीमती धातु फेला पार्न "गोल्ड डिगर्स" को कला हो। उनीहरूले यो 'खनिज' बोलाउँछन्। यी व्यक्तिहरू वा कम्पनीहरू हुन् जुन सत्यशी नाकामोटो द्वारा बनाईएको नयाँ डिजिटल सुनको खोजी गर्ने। यसका लागी उनीहरूले निश्चित कोड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन संदेहका साथ साबित हुन्छ भनेर यो बिटकोइन प्याकेज हो। यसैले बिटकोइन गेमले एन्क्रिप्शनको वरिपरि घुमाउँछ र एन्क्रिप्टेड प्याकेटहरू बिटकोइन्सहरू फेला पार्न खोज्छ। 'खनिजहरू' उनीहरूले खोजीका साथ बिटकोइन प्याकेजहरूको सुरक्षामा पनि योगदान गर्छन्। हामी धेरै खोज्छौं, सुरक्षित र हिक्कर्स ह्याकरहरूको लागि हुन्छ (कम्तीमा यो विश्वास हो)।
अब विशेष कुरा यो हो कि बिटकोइन ईस्टर अन्डाको सीमित मात्रा विश्वव्यापी वेबसाइटमा लुकेको छ। बिटकोइजको शुरुआती दिनमा, तपाईंले खनिजहरूको उदय देखाउनुभयो (डिजिटल सुन डेजर)। उनीहरूलाई कहिलेकाँही एक प्याकेज बिटकोइन्सहरू फेला पर्यो, ताकि अधिक देखि अधिक बिटकोन्स बजारमा आए। बीचमा, यो बिटकोइन्सको मात्रा फेला परेको छ कि जस्तो देखिन्छ। र यदि बिटकुइन धेरै रोचक विशेषताहरूसँग नयाँ प्रकारको अनन्य कीमती धातुको तुलनामा हुन सक्छ, यसको लागि यसको अर्थ हुनेछ। र यदि त्यो बहुमूल्य धातु धेरै रोचक हुन बाहिर जान्छ भने, त्यसपछि माग बढ्छ। यदि "सुन डाइगर्स" द्वारा बिटकोइन्सहरूको संख्या भने स्थिर हुन्छ, त्यसपछि तपाइँले नयाँ विशेष कीमती धातुको मूल्य वृद्धि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ कमी र कमी प्राप्त हुन्छ अर्थ 'मूल्य वृद्धि' हो।
अब बिटकोइज बहुमूल्य धातु होइन, तर यसमा विशिष्ट विशेषताहरू छन्, त्यसैले तपाइँ भन्न सक्नुहुनेछ कि यो एक धेरै विशेष कीमती धातु हो। यद्यपि, यो भौतिक धातु होइन वा कुनै पनि चीज छ कि तपाईं पक्राउन वा छुन सक्नुहुन्छ। यो डिजिटल सिर्जना गरिएको इन्क्रिप्सन प्याकेज भन्दा बढी छैन। त्यसोभए एक बिटकोइन हो, जस्तै थियो, डिजिटल र संसारमा एक प्याकेज र नलहरू। तपाईंले यसलाई देख्नुभएन, तपाईं गंध वा छुनु सक्नुहुन्न र निश्चित रूपमा शारीरिक रूपमा यसलाई खानमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। यसैले बिटकोन्सहरूको खनन गणित समस्या हो। तपाईले यसको लागि कम्प्युटर चाहिन्छ, कोड पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसपछि बिटकोन्सहरू निकाल्नुहोस्।
Bitcoin को बारे मा विशेष छ? बिटकोइन पहिलो नामले क्रिटोक्रोरेन्सी मुद्रा थियो। त्यसपछि त्यहाँ बजारमा छन्। तथापि, ती कम सफल देखिन्छन। यो दुई कारण हुन सक्छ: 1। तिनीहरू पहिलो थिएनन् en 2। तिनीहरूले अझैसम्म कमीमा पुगिसकेका छैनन्, ताकि मूल्यमा कुनै विस्फोटक वृद्धि भएको छैन (जसको परिणाममा उनीहरूले लाभदायक असाधारण इकाई भएनन)। बिटकोइनले प्रारम्भिक सङ्कलनकर्ताहरूलाई धनी बनाएको छ र अझै पनि उनीहरूलाई केहि गर्न को लागी धनी बनाउँछ। कसलाई अहिले चाहेको छैन? मुद्रा जो शारीरिक रूपमा अवस्थित छैन (किनभने यो एन्क्रिप्टेड प्याकेज एक र दुई) भाग्य खोजकर्ताहरूको साथ लोकप्रिय छ। एकै समयमा, यो यो बढ्दो माग हो कि यो सुनिश्चित गर्दछ कि ठूला कम्पनीहरूले बिटकोन्सलाई भुक्तानी इकाईको रूपमा पनि स्वीकार गर्न थाले। और निश्चित रूप देखि तपाईं यूरो, डलर को लागि bitcoin विनिमय र तपाईं यसलाई नाम। ती यूरो र डलरहरू तपाईंको बैंक खाता नम्बरमा मात्र एक नम्बर हुन्, तर तपाईले उनीहरूलाई बाहिर नगरी मेसिनबाट एक स्टेशनरीको रूपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो ठोस छ, त्यसैले हामी जान्दछौं।
चाहे बिटककोइज जीवित रहन्छ किनकि मुख्यतः उपभोक्ता बजारमा घिमिरे रकमको प्रश्न हो। यदि बिटकोइज भुक्तानीको माध्यमको रूपमा अधिक र अधिक स्वीकार गरिएको छ, त्यसोभए सम्भवतः यो चिन्ह हो कि विनिमयको माध्यम जीवित रहनेछ। विनिमय को यस्तो तरिका को लाभ यो कि नियमित बैंकों को माध्यम ले सबै प्रकार को जटिल अन्तरराष्ट्रीय लेनदेन मा निर्भरता बनाइन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं अहिले बैंकको माध्यमबाट जापानमा पैसा हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो केही दिन लाग्ने हुनेछ र यसले तपाईंलाई पैसा खर्च गर्नेछ। बैंक लेनदेनको लागि भुक्तान गर्न चाहानुहुन्छ; उनीहरूले 'लेनदेनको खर्च' लाई बोलाउँछन्। एक बिटकोइन स्पेसमा छ र कुनै लागतमा हस्तान्तरण गरिएको छ। तपाईं Bitcoin धेरै रोचक क्रस-बोर्डर मुद्रा एक वैश्विक शासन जहाँ डलर, यूरो, रुबल र युआन र तिनीहरूको दर जस्तै मुद्राहरू transcended गर्न सकिन्छ हुन सक्छ भनेर भन्न सक्छ। यो केवल एक तथ्य हुन सक्छ यदि तपाईं bitcoins मा सबै केहि पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामी बिटककोइन मार्फत ग्लोबल कर प्रणालीको लागि कल पनि देख्नेछौं। सबै पछि, त्यस मुद्राले सबै प्रकारको कर सीमाहरू बचाउँछ, र तपाइँ त्यो चाहनुहुन्न। त्यसैले तपाईले भन्न सक्छ कि बिटकोइज एक उपकरण हो जसले ग्लोबल वित्तीय प्रणालीको स्थापना बढाउँछ र मद्दत गर्दछ। र तपाईं तर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि बिटकुइनले नगदहीन समाजलाई एक हातमा सहायता गर्दछ।
तपाईं अहिले त तपाईं प्रश्न गर्न सक्छन् आफैलाई सोध्न प्रश्न छ: म (कारण माथि उल्लिखित कमी गर्न) मूल्य मा आ वर्ष मा वृद्धि जारी संभावना छ कि एक डिजिटल मुद्रा संग धनी द्रुत प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ वा म डिजिटल संसारमा दोहन गर्न मदत गर्नेछ र एक वैश्विक नियन्त्रण प्रणाली जहाँ सबै केहि डिजिटल छ (पैसा सहित)?
क्रिप्टप्टोरेसीसी बिटकोइन जस्तो कति सुरक्षित छ?
यद्यपि तपाइँ यसलाई घुमाउनुहोस् वा बदल्नुहोस्: कसैको समूह वा बिटकोइन सिद्धान्तको साथ आउँदछ। अब हामी यो मुद्रालाई एक 'क्रिस्टप्लोरेसी' भन्छौं। वास्तवमा शब्दले "मुद्रा" को सार भनेको के भन्छ: क्रिप्टो। त्यहाँ एन्क्रिप्शन छ। र इन्क्रिप्सन केहि छ कि यसको पछि सूत्र छ। र एक सूत्र गणना गर्न तपाईंलाई क्यालकुलेटर चाहिन्छ। हामी अहिले कम्प्यूटरको रूपमा कम्प्यूटरमा उल्लेख गर्दछौं। धेरै जटिल इन्क्रिप्सनका लागि तपाईंलाई परिणामको गणना गर्न एक धेरै भारी कम्प्यूटर चाहिन्छ। त्यो परिणाम प्याकेजमा कहीं हुनुपर्दछ। त्यसैले त्यहाँ एक मिल्दो हुनुपर्दछ। धेरै बिटकोन्स फेला पार्नका लागि धेरै मेलहरू सम्भव पर्छ। यसैले 'खनिजहरू' भारी कम्प्युटरहरू चाहिन्छ। तर यसले एन्क्रिप्शन सूत्रको आविष्कारकको बारेमा प्रश्न उठाउँछ। यदि सत्यशी नाकामोटो (वा समूहले आफैलाई कल गर्दछ) 2009 मा यस अवधारणामा आउँथ्यो, उनीहरूले खेल निर्माण गर्थे, जस्तै कि, त्यस समयमा प्रविधिमा।
हामी यो गुप्त मुद्रा को गुप्तिकरण टूट गरिने 1% छैन, वा 20 90 %% निश्चित, तर 100% पक्का, वर्तमान प्राविधिक विकासक्रम हेर्न। तपाईं कसरी यो बारे निश्चित हुन सक्नुहुन्छ क्वांटम भौतिकीको क्षेत्रमा विकासको कारण र क्वांटम कम्प्यूटरको क्षेत्रमा (डचमा क्वांटम कम्प्युटरहरू)। यो ले लो कोउवेनहाभन भन्दा राम्रो यो व्याख्या गर्न सक्दैन। यदि तपाईंले तल भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि क्रिप्टो - वा 'इन्क्रिप्सन' - क्वांटम कम्प्यूटरको लागि समस्या हुने छैन जुन अहिलेको विकासमा छ। ठूला कम्पनीहरूसँग पहिले नै कम्प्युटरहरू छन् जुन क्वांटम कम्प्युटिङ सिद्धान्त अनुकरण गर्दछ, तर हामी अहिलेको समयको हौं जब रियल क्वांटम कम्प्युटरहरू आउनेछौं। ती कम्प्यूटरहरूका लागि एन्क्रिप्शन हलमा हल गरिएको छ। त्यसैले एक क्वांटम कम्प्यूटर ह्याकरको हातमा सम्पूर्ण क्रिप्टप्टोरेसी संसार सफा गर्न सक्छ। र चाँडै क्रिप्टक्रोसीसी र वास्तविक संसार बीचको अन्तर्वार्ताको कारण उत्पन्न भएको छ, यसले धेरै चम्किरहेको प्रभाव दिन सक्छ। साथै, सामान्य बैंक लेनदेन पनि एन्क्रिप्शन विधिहरू मार्फत व्यवस्थित छन्। यही कारणले तपाइँले तपाइँको कार्ड यस्तो ठूलो बैंक रिडरमा ठूला लेनदेनको साथ राख्नु पर्छ।
खतरनाक खतराको यस समस्याको समाधान के हो? समाधान सामान्यतया विनियममा छ। क्रिप्टो मुद्रा र सामान्य एन्क्रिप्शन डिजिटल दुनिया को Achilles एड़ी छ। र त्यो डिजिटल संसारमा एन्क्रिप्शन मात्र वृद्धि र वृद्धि हुनेछ। 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा सबै चीज एक अनियमित एन्क्रिप्टेड ह्यान्डमार्क हुनेछ। ACCHain अब यो लागि तैयार गरिएको छ। यदि तपाईं डिजिटल संसारमा धनी बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ अब जानुहोस् ACChain चरणहरू। एघेन हो, जस्तै कि, अब नयाँ मानक जुन जापानबाट डिजिटल एन्क्रिप्टेड कोड उत्पादन गरिएको सबै चीजहरू प्रदान गर्न लगाइएको देखिन्छ। नयाँ क्रिप्टो मुद्रा यससँग जोडिएको छ; एसीसी। यो बिटकोइन जस्तो छ, तर त्यसपछि ACC ले पनि कुन उत्पादनलाई लिङ्क गरिएको छ भन्ने ट्रयाक राख्छ। यो बिटकोइजको रूपमा एक्सचेन्जको माध्यम हो, तर त्यसोभएको यो कही हातमा रहेको छ र कुन उत्पादनहरूसँग यो व्यवसाय गरिएको छ। यदि तपाईं विश्वव्यापी नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, ए ACC शायद बिटककोइन 2.0 र समूहको गीला सपना जुन 1 मध्य विश्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा सबै चीज र सबैजना एक अद्वितीय कोड हुन्छ र सबै ट्रेस गर्न योग्य छ। यद्यपि, त्यो सम्पूर्ण प्रणाली 1 सिद्धान्तमा पूर्णतया निर्भर छ: एन्क्रिप्शन।
त्यसैले यदि सम्पूर्ण संसार एन्क्रिप्शनमा निर्भर छ र हामी ईन्चरेसनले नजिकैको भविष्यमा एन्क्रिप्शन ह्याक गर्न योग्य छ जुन हामीले आफैले गरेको छ, यो नियमको लागि फोन होइन? यो विश्वव्यापी समाधानको लागि यो गम्भीर गम्भीर खतरा होइन? हो, निस्सन्देह। त्यसपछि हामी देख्न सक्नेछौं कि एन्क्रिप्शनको अधिकार ठूलो कम्पनीहरूको हातमा छ जुन त्यसपछि एन्क्रिप्शन 'क्वांटम प्रमाण' बनाउनको लागि त्यहि क्वांटम कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। र ठूला कम्पनीहरू (जो तीव्र भएका छन्) को लागी वेब बिल्डर्स भन्दा बढी केहि छैन केन्द्रमा स्पिन गर्नुहोस्। निस्सन्देह म Google, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्तै ठूला प्रविधिको बारेमा कुरा गर्दैछु। इन्टरनेट, चीजहरूको इन्टरनेट र क्रिप्टक्रोमेन्सीले शक्ति आत्मनिर्भरताको केन्द्रीकरणको लागि कल गर्नेछ। यसैले हामी आफैलाई संसारको डिजिटाइजेसनसँग सम्बद्ध प्राविधिक प्रगतिमा निर्भर रहन्छौं र निर्भरताले हामीलाई थप निर्भर गर्दछ। तपाईं र म आफ्नै वेबमा बुनाई www।
बिटकोइन र ठूलो डाटा नयाँ सुन र नयाँ तेल?
यसले हामीलाई बिटकुइन नयाँ सुनको प्रश्नमा ल्याउँछ र चाहे ठूलो डाटा नयाँ तेल हो कि? आर्थिक परिप्रेक्ष्यबाट यस जवाफको लागी हाँसो देखिन्छ। निस्सन्देह, बिटकोइज पनि एक प्रचार हुन सक्छ, तर जब चाँडै ठूला कम्पनीले यस्तो क्रिप्टो मुद्राको सुरुवात गर्न थाले, युद्धको जित जित्छ र यो धेरै बिलबुला बिस्फोट हुनेछैन। त्यसकारण मात्र खतरनाक खतरा एन्क्रिप्शन ह्याकिंग गर्ने हो। साथै, कमीको मूल्यमा स्थायी वृद्धिको पछि मोटर रहन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा पहिलो संस्करणमा पराजित भएमा मूल्यमा यो वृद्धि शायद केही संघर्ष हुन सक्छ। हामीले हाइइभ र फेसबुकसँग देख्नुभएको छौँ र शायद त्यहि कुरा ACC को रूपमा अपेक्षाकृत अज्ञात मुद्राको साथ हुनेछ। कसलाई थाहा छ? अहिले सम्म बिटकोइन बलियो देखिन्छ र मान केवल बढ्दै जान्छ। यो कमीबाट प्रेरित हुन्छ: आपूर्ति र माग। अधिक बिटकोइन्समा व्यापार गर्न सकिन्छ, अधिक व्यक्तिहरू बिटकोन्स हुन चाहन्छन्।
र जब उनि क्रिप्टप्टोरेन्सीहरू आफ्नो उद्भव संग व्यस्त छन्, हामी 'चीजहरु को इन्टरनेट' र साथ ठूलो डाटा को उद्भव देख्छौं। 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा सबै चीजहरूसँग सबै कुरा संवाद गर्दछ, जस्तै यो थिए। हामी एक समयमा जान्छौं जब तपाइँ सुपरमार्केटबाट ल्याउनुभएको प्रत्येक प्याकेज तपाईंको कारमा स्मार्ट फोनमा, तपाईंको फोनमा र तपाईंको घरमा "महसूस" छ। यो जान्छ कि तपाईंले खाए पछि के खाए पछि। वास्तवमा, सबैजना सधैँ र सबै ठाउँमा जान्छन्। र त्यो सबै डेटा त्यहाँ सबै चीजहरू फिल्टर गर्न विश्लेषण गरिन्छ। यस तरिकामा, एक पूर्ण, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र स्वास्थ्य प्रोफाइल प्रत्येक व्यक्तिबाट बनाइन्छ। र त्यो रोचक डेटा हो। त्यो आर्थिक मानको साथ डेटा हो। उदाहरणका लागि, तपाईं चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ किनकी तपाईं जान्दछन् कि तपाई कुन व्यक्तिको सोच हुनुहुन्छ र वास्तवमा तपाई कसरी उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईं सबै पतला छ जब धेरै पक्कै छान्न सक्नुहुन्छ; शहरमा जसमा तपाईं बस्नुहुन्छ। तपाईं ब्यक्तिहरु सँगै सँगै लैजानुहुन्छ जुन तपाई सँगै एक साथ ल्याउनुहुन्छ, तपाईले ट्राफिक प्रवाहहरू चलाउन सक्नुहुनेछ र सामाजिक आचरणहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। ठूलो डेटा ठूलो पैसा हो र यसैले तपाईंले भन्न सक्नुहुनेछ कि ठूलो डाटा आजको नयाँ तेल हो।
दिमागमा यो सबै ज्ञानको साथ, प्रश्न अब लामो छैन: "के विश्वको डिजिटाइजेशन राम्रो छ वा खराब?" मैले कृत्रिम बुद्धिको बारेमा कुरा गरिनँ र एलोन मुस्किल जस्तै व्यक्तिहरूको फोन डिजिटल संसारसँग मर्ज गर्न हामीलाई (कृत्रिम बुद्धि) रोक्न हामीलाई रोक्न। यसैले हामीले मस्तिष्क जडान (विकासमा) मार्फत र एकीकृत गर्नुपर्छ एलोन मुस्कको न्युरेलिंक मानव दिमागको एक बुद्धिमान नेटवर्क बनाउन को लागी, ताकि हामी एआई मा फायदा छ। यो एक विशेष विचार हो र यो 'एअर को खतरनाक खतरा' को दृष्टिकोण देखि सम्भव छ, तर हामी त्यो दिमाग जडान र जान्दछ कि Google को बिग डेटा सर्भर सबै केहि राख्छ र सबै केहि को विश्लेषण, एक धेरै डरावना एक ज्ञान को लागी जान्छ। संसारलाई भेट्न? Cryptocurrency, चीजहरूको इन्टरनेट, 5G सञ्जालहरू, बिग डेटा र मस्तिष्क जडान; यो बन्द कहाँ छ? या हामी बस एकता को समर्पण गर्न को लागि? तपाईलाई थाहा छ कि बहुतायतता जहाँ Google को सीईओ रे कुर्जविल हामीलाई पठाउन चाहन्छ? मानिसको र कृत्रिम बुद्धिको मिश्रण अर्को विकासवादी चरण। के हामी चाहन्छौ कि हामी के चाहन्छौं वा यो गहिरो भइरहेकोमा हामी को अन्तिम हटाउने हो? (पढ्नुहोस् यहाँ थप)
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, bitcoinspot.nl
फोस्शिस्ट 2.0 'स्मार्ट स्मार्टफोन' को अवधारणा मार्फत तपाईलाई रोक्का गरिएको छ (स्मार्ट शहर)
स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू तपाईंको फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, सन्देश पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस् र क्यामेरा र माइक्रोफोनमा साथ हेर्नुहोस्
तपाईंको बीमा प्रीमियम 'followable pill' प्रविधिको साथ बढ्न सक्छ
स्मार्टफोन मार्फत तपाईंको भावनाहरूको वायरलेस माप सामाजिक इन्जिनियरिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ
कसरी राज्यले तपाईलाई कहाँ पुग्नुहुनेछ, तपाईले के गर्नुहुन्छ, खरिद र बेच्न सक्नुहुन्छ
ट्याग: 10.000, acc, acchain, फट, लगानी, लगानी, अर्थ, Bitcoin, bitcoins, बबल, क्रिप्टो, cryptocurrency, मुद्रा, डलर, विस्फोटक, विशेष, सुन, किनारा, लगानी, जापान, clapping, स्न्याप गर्न, सिक्का, मुद्रा, उदय, के छ, लाभ, बबल
27 नोभेम्बर 2017 मा 18: 11
वा यसको लागि त्यहाँ छ?
27 नोभेम्बर 2017 मा 19: 42
28 नोभेम्बर 2017 मा 12: 30
28 नोभेम्बर 2017 मा 13: 26
(विकिपीडियाबाट) सिंगलिरिटी: त्यहाँ धेरै विशिष्ट अर्थ छन्:
एकलता (गणित): एक मान जसमा एक प्रकार्य परिभाषित छैन, उदाहरणका लागि एसिम्प्टोटको साथ
एकलता (भौतिकी): अन्तरिक्ष-समयमा एक बिन्दु जुन प्रकृतिको नियमले आफ्नो वैधता गुमाउँछ
एकलता (नियन्त्रण प्रविधी): राज्य जो रोबोट आउन सक्छ, यदि दुई वा बढी स्वतन्त्र आंदोलनहरूले परिणाम पाएका छन् जुन ती आन्दोलनहरूको परिणाम लक्ष्यमा समान प्रभाव छ।
एकताबद्धता (मौसम विज्ञान): मौसमको अवस्था वा मौसममा उचित तय समयहरू जस्तै बर्फ संतहरू परिवर्तन हुन्छन्
• प्राविधिक एकलताता: भविष्यमा बिन्दुमा टेक्नोलोजी प्रगति अनंत हुन्छ।
यसका बारेमा सैद्धान्तिक बलहरूको पुस्तकहरू।
एकता सैद्धांतिक अवधारणा भन्दा सिंगापुर छैन, यदि यो सही भए हाम्रो सम्पूर्ण ब्रह्मा अवस्थित हुन सकेन। "अवस्थित अवस्थित" दिन दिन यो केवल मानव भ्रम द्वारा बनाईएको डिजिटल भ्रम मा मात्र छ। त्यो मानिस, तिमी सिर्फ बाहिर प्लग खींच लिन ऐ द्वारा अन्तिम / लोप हास्यास्पद छ, यो हुन सक्छ कि कल्पना र poof टाढा अब कसलाई निर्भर छ जसले ऐ ...... छ?
28 नोभेम्बर 2017 मा 13: 50
यसैले एअर वित्तीय प्रणाली (ब्लकचिन धन मार्फत) र सहकर्मी को माध्यम ले सहकर्मीहरु संग आफु को नेटवर्क मा मुकदमा हरेक कम्प्यूटर को उपयोग गरेर अधिक बुद्धिमानी बनाइयो। त्यो सुन्दर रूप देखि फिल्म ट्रांसफरेंस मा चित्रित छ। एअरले यो प्रदान गर्दछ, जस्तै कि थिए, ब्लकचेन को माध्यम ले एक हाइव दिमाग। र एएले आफैं ब्लकचेन (क्रिप्टो मुद्राको रूपमा बिटकोइनको रूपमा) को समृद्धि गर्दछ र सामान्य संसारमा (विशेष गरी ठूलो निगमहरू) पनि ब्लकचेनमा धेरै लगानी गर्दछ, कसैले पनि एआईभीबाट प्लग हटाउन आग्रह गर्दैन।
त्यो शब्द प्राकृतिक विज्ञान बाट उधारिएको छ, शब्द को लेखक, रे कुर्जविल, आफैले। सार यही छ कि एकलताता ठूला ठूला कम्पनी, राष्ट्रपति र देशहरूको शीर्षमा रहेको व्यक्ति हो। यो केहि होइन कि सऊदी अरब सोफियाको नागरिकता प्रदान गरेन।
28 नोभेम्बर 2017 मा 15: 17
यो नगदहीन समाजको चित्रमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ:
स्रोत: अर्थशास्त्री; 01 /9/ 88, Vol। 306, पीपी 9-10
अहिलेदेखि तीन वर्ष, अमेरिकन, जापानी, यूरोप, र धेरै अन्य देशहरूमा मानिसहरू, र केहि अपेक्षाकृत गरीबहरू शायद उनीहरूको खरीदारीको लागि त्यहि मुद्राको लागी तिर्नेछन्। मूल्य उद्धृत गरिनेछ डलर, येन वा D अंकमा छैन, तर यसमा, फीनिक्स भन्नुहोस्। फीनिक्स कम्पनी र विक्रेताहरू द्वारा अनुमोदित हुनेछन् किनभने यो आजको राष्ट्रिय मुद्राहरू भन्दा बढी सजिलो हुने छ, जुन अन्तिम दशौं शताब्दीमा आर्थिक जीवनको धेरै विच्छेदको विचलित कारण हुनेछ।
29 नोभेम्बर 2017 मा 02: 37
उनीहरूले हाम्रो अनुहारमा दायाँ बोल्छन् र हामीलाई थाहा छ कि अर्थशास्त्री भनेको हो:
उत्कृष्ट क्र्यास पछि, अनलाइन मुद्राले एउटा आश्चर्यजनक वापसी गर्छ
प्रिन्ट संस्करण वित्त र अर्थशास्त्र
सेप्टेम्बर 29th 2012
"मलाई राष्ट्रको पैसा आपूर्तिको नियन्त्रण दिनुहुन्छ, र मलाई परवाह छैन कि कसले यसको कानुन बनाउँछ।" त्यसो भए रोमस्किल्ड बैंकिंग राजको संस्थापक मेयर अमस्चे रोथोस्लिल्ड। के उनले वा Bitcoin, कुनै जारी अधिकार प्राधिकरण संग एक अनलाइन मुद्रा के थियो? अनलाइन क्रिस्ट्रोक्रेसीसी अझै पनि बलियो हुँदै जाँदैछ, कम से कम कानूनको परिसमापन गर्न यसको लागी धन्यवाद।
29 नोभेम्बर 2017 मा 12: 44
@ZIo, म बुझ्छु तपाईं कहाँ जान चाहानुहुन्छ र zh मा ग्राफले बताउँछ कि नेदरल्याण्डमा अनुकूलन स्तर धेरै उच्च छ। तपाईंको जेबमा कम नगद र अधिक डिजिटल / वायरलेस लेनदेन। यो वास्तवमा जहाँ कुलीन हामीलाई चाहन्छ र जहाँ मात्र भेडाका अन्य बगालहरूको बाकी बगालको मात्र एउटा चीज हो जुन एक उचित संकट हो।
केवल क्रिप्टको कुल बजार मान हेर्नुहोस् र विश्वको कुल लगानी पूंजीमा हेर्नुहोस्, त्यो ठूलो छ। म बिटकोसिन्स र अरू क्रिटोसहरू सजिलै र विस्तारै बढ्छन्, एक संकटको घटनामा पनि स्क्वायर पनि। साँच्चै, Rothschild गरेको यो सबै दिनुभयो र यहाँ हामी 1988, यो सिर्फ सबै फिएट पैसा बेकम्मा हुन्छ कि संकट / संकटहरूको लागि प्रतीक्षा छ अब आउनुहोस्। केन्द्रीय बैंकले यो खेल धेरै राम्रो तरिकाले खेलिएको छ, विशेष गरी एफईडी र ईसीबी।
« ब्रायन निजहोफ रसीय नेइभबर्गको सन्दर्भमा सत्र र 'योग्य हवेली' को समयमा उपस्थित छैन
माइकल पी। समस्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया समाधान टीबीबी तिर सबैलाई बलियो बनाउन? »
कुल भ्रमण: 4.272.322